Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha ONLF oo kulan la qaatay hoowladeenada iyo jaaliyada Somaalida Ogadenya ee Switzerland.
Gudoomiyaha ONLF oo kulan la qaatay hoowladeenada iyo jaaliyada Somaalida Ogadenya ee Switzerland.
Wafdi uu hogaaminayay Gudoomiyaha Jabhada Xoreeynta Ogaadeenya Mudane Maxamed Cumar Cusmaan oo uu wehliyo Xildhibaan Maxamed Cali oo dhawaanahan kulan hoowleed ku marayay wadamada Yurub ayaa maanta kulan shaqo la qaatay xubnaha iyo hoowladeenada JWXO ee ka hoowl gala wadanka Switzerland.
Gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay halganka meesha uu marayo, dhibaatooyinka jira iyo doorka jaaliyadaha kaga aadan sidii shacabka Ogaadeenya dhibaatada gumeeysiga baday looga saari lahaa. Kulankan oo ay albaabadu u xirnaayeen ayaa si waafi ah lagu lafa guray tabaha gumeeysiga iyo oo gumeeysi kalkaal adeegsanaya iyo sidii looga hortagi lahaa.
Gudoomiyaha JWXO Mudane Maxamed Cumar Cusmaan ayaa carabka ku adkeeyay in gumeeysiga madoow Ogaadeenya looga adkaaday miciina badan in uu ku kaco falal argagaxiso ah oo ay ka mid tahay afduub iyo dilal uu ka fuliyo wadamada darisk ah. Gudoomiyaha ayaa xusay in gumeeysatada itoobiya wax tixgalina ah u heeynin jiritaanka iyo karaamada wadamada dariska ah isagoo tusaale u soo qaatay afduubkii naftood hurayaasha Sulub iyo Cali Dheere gumeeysiga ka fuliyay Nairobi raadkedana qoyan yahay lana hayo kuwii afduubka ka qeeyb qaatay qaarkood hadana taliska macangaga ku adkeeysanayo in aanu wax war ah arrintani ka heeyn.
Gudoomiyaha ayaa gumeeysiga ku tilmaamay abeeso aan waxba xeerin lagana yaabin in ay ka waantoowdo leeynta shacabka oo ay biloowday kolkii ay Ogaadeenya damacday in ay xeendaabado. Waxa kaliya ee gumeeysigu yaqaano waa luuqada qoriga oo ay hada qiratay in JWXO gaartay heer ay ka iro dhalin karto himilada shacabka Ogaadeenya.
Gudoomiayaha ONLF ayaa soo hadal qaaday dhacdaddi Guriceel ee halgamayaal qaali ah gumeeysiga madow loogu gacan galiyay. Adm. Maxamed Cumar wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed taageero weeyn u hayaan halganka JWXO hogaamineeysa hase ahaatee gumeeysigu uu meelo badan oo Soomaaliya ah ku yeeshay dhaba dhilifyo u adeega. Xaqdarada jawaasiista gumeeysiga u shaqeeya u geeysanayaan xaq u dirirka Ogaadeenya ma ahaan doono xisaan la’aan ayuu gudoomiyuhu hadalkiisa sii raaciyay. Waa arrin halaag ah in shaqsi isir Soomaaliyeed uu u shaqeeyo cadawgiisa soo jireenka ah: galitaanka itoobiya ee Soomaaliya ayeey itoobiya uga dan leedahay in aan dib danbe loo arag Jamhuuriyad Soomaaliyeed oo madax banaan.
Shacabka Soomaaliyeed ee G/Afrika ayeey ka muuqataa walwal uu gumeeyisga ku hayo iyada oo aay soo noqoneeysa Soomaalinadii horseedi doonatana in damaca gumeeysiaga madoow laga hortago.
Ugu danbeeyntii Gudoomiyah JWXO ayaa xubnaha jaaliyad Ogaadeenya ee Switzerland kula dardaarmay in ay u diyaar garoobaan isdaba raacinta gumeeysiga iyo munaafiqiinta la shaqeeysa. Kulankan oo waqti badan socday ayaa lagu qaaraa dhigay qorshayaal jaaliyada oo bahwadeegteeda kaashaneeysa ku hoowl galayaan.
Jaaliyada S. Ogaadeenya ee Switzerland.